रुकुमका गाउँहरु उज्यालिदैं « Sahakari Nepal
रुकुमका गाउँहरु उज्यालिदैं
प्रकाशित मिति : 14 April, 2015 8:07 am
रुकुम वैसाख १ । देश लोडसेडिङको मारमा परिरहेको बेला रुकुमका गाबिसहरु भने धमाधम अँध्यारोमुक्त गाबिस घोषणा हुन थालेका छन् । रुकुमलाई अँध्यारोमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान अन्र्तगत हाल सम्म दुई वटा गाविस अँध्यारोमुक्त गाबिस घोषणा भएका छन् भने अव एक महिना भित्र ३ वटा गाबिस घोषणाको तयारीमा रहेका छन् । रुकुम उज्यालो कार्यक्रम अन्र्तगत जिल्लाको चौखावाङ्ग गाविसलाई अध्याँरोमुक्त गाविस घोषणा गरिएको छ ।
गाविसमा ३ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन पछि चौखावाङ्ग गाविसलाई जिल्लाको दोश्रो अध्याँरोमुक्त गाविस घोषणा गरिएको हो । भेरीखोला लघु जलविद्युत आयोजना, चुनखोला १ लघु जलविद्युत आयोजना र चुनखोला २ लघु जलविद्युत आयोजना गरी चौखावाङ्ग गाविसमा ७४ किलोवाट क्षमताको विद्युत उत्पादन भएको छ । ३ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट गाविसका सवै घरधुरीमा विजुली वलेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएका ३ वटै आयोजनाको उद्घाटन गरिएपछि औपचारिक रुपमा चौखावाङ्गलाई अध्याँरोमुक्त भएको घोषणा गरिएको हो । घोषणा कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख अतिथि रुकुम क्षेत्र नं. २ का सभासद् तथा व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा प्रभाकरले रुकुम उज्यालो कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्दै गएको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“जिल्लाका सवै गाउँ वस्तीलाई नै अध्याँरोबाट मुक्त गराउने अभियानमा स्थानीयको उत्साहपुर्ण सहभागिता छ ।” सवैको साथ र सहयोगबाट उज्यालो कार्यक्रमले पुर्णता पाउँदै गएको सभासद् शर्माको भनाई छ ।
अध्याँरोमुक्त घोषणा गर्ने अभियानलाई प्रचारात्मक मात्र नभई वास्तविकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जनयुद्धको बेलामा समेत अग्रणी भुमिका खेलेको चौखावाङ्गले अहिले विकासको काममा समेत नेतृृत्व गरिरहेको भन्दै सभासद् शर्माले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जिल्लाका सवै गाविसलाई सडक संजालमा जोड्ने प्रयास जारी रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । सरकारले समानुपातिक वजेट वितरण नगरेको कारण दुर्गमका जिल्लामा सोचे अनुसारको विकास हुन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– सरकारले समानुपातिक वजेट वितरण नगर्दा समस्या भएको छ तर हामीले जिल्लाको विकासका लागी संघर्ष जारी राखेका छौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता समेत रहनुभएका शर्माले अहिले आफ्नो पार्टी युद्ध नभई देशको संवृद्धि र सवैको प्रतिनिधित्व हुने संविधान चाहेको वताउनुभयो । कार्यक्रममा विषेश अतिथि क्षेत्र नं. १ का सभासद् गणेशमान पुनले अध्याँरोमुक्त घोषणा कार्यक्रमले सवैमा उत्साह वढाएको भन्दै दिगोपनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वदलिएको परिवेशमा विद्युतले आर्थिक संवृद्धिको ढोका खोल्ने सभासद् पुनको भनाई रहेको छ । विकासमा सवैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको वताउँदै उहाँले मुसिकोट चुन्वाङ्ग कृषि सडक खण्डलाई यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यस अघि रुकुमको स्यालापाखा गाबिसलाई जिल्लाको पहिलो अध्यारोमुक्त गाबिस घोषणा गत फाल्गुनमा गरिएको थियो ।